अबदेखि पैसा बचाउनु छ भने यस्ता कुरामा ध्यान दिने कि ?
काठमाडौं । महँगीले पेल्दै जाँदा धेरैलाई आम्दानीको थोरै हिस्सा पनि बचाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । धेरैलाई पैसा बचाउनै पर्ने अवस्था छ । तर, कतिपयले यति थोरै पैसा जम्मा गरेर के नै हुन्छ र भन्ने पनि गरेका छन् । कमाई थोरै भएपनि बचत गर्ने बानी राम्रो हो । यसले आफ्नो आवश्यकताहरुलाई कहिलेकाँही टारिदिने गर्छ । त्यसोभए कसरी गर्ने त बचत ?
- आफै पकाएर खाने
- घरमा तयार गरेको खाना तथा खाजा खाने
- बाहिर गएको समयमा खानाको बन्दोबस्त पहिले नै गर्ने
- पेय पदार्थ रेष्टुरेन्टमा नखाने किनकी रेष्टुरेन्टहरुले बढी मुनाफा पेय पदार्थहरुबाट कमाउने गर्छन्
- रेष्टुरेन्टको खानेकुराहरुको सुची हेरेर मात्रै अर्डर गर्ने, आफु प्रश्ट नभएम सोध्न नहिचकिचाउने
- चिया तथा कफी आफै बनाउने
लुगाफाटो तथा सामाग्रीहरुः
- अनलाइन वा पसलमा पर्ने मूल्य तुलना गर्ने
- तपाई सधैं लन्ड्रीमा कपडा धुनुहुन्छ भने धुन नपर्ने कपडाहरु खरिद गर्नुहोस्
- सिजनेवल अफर, फेस्टिवल अफर, एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा जस्ता अफरहरुमा ध्यान दिने
आफैले गर्न सक्ने कामहरु:
- दाह्री आफै काट्ने
- कपाल आफै रंगाउने
- होम सर्भिस सेवा लिनुको सट्टा आफैले सामनहरु लिन जाने
- युट्युबको प्रयोग
- सिनेमा हेर्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने छुटमा हेर्नुहोस्
- लाइब्रेरीमा जाने
- टेलिभिजन हेर्ने
- प्याकेज टुर
- अफ सिजनमा भ्रमण गर्ने
- अनलाईनको भरपुर प्रयोग गरि खाने बस्ने तथा घुम्ने ठाउँको जानकारी लिने ।
उपत्यकामा जारी जोर बिजोर प्रणालीको बारेमा समिक्षा हुने
काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा तीन वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरुले उपत्यकामा जारी जोर बिजोर प्रणालीको बारेमा समिक्षा गर्ने भएका छन्। भोलि शुक्रबार बस्ने सिडिओहरुको बैठकले यो विषयमा समीक्षा गर
जनकपुर । जनकपुरधाम स्थायी राजधानी भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ ।